'भाँडा माझ्न पलायन भएको’ नेपाली उद्यम
विचार 'भाँडा माझ्न पलायन भएको’ नेपाली उद्यम डा. पुण्यसागर मरहट्टा
बाह्रखरी - शुक्रबार, फागुन ७, २०७७
डिसेम्बर ३०, २०२० को दिन ग्लोबल नेवा कन्फरेन्समा ‘यल’ज इभोलुसन थ्रु कुनु शर्मा’ज कीर्तिपताका' शीर्षककाे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने मौका मिल्यो । हामीले अहिले देखेको पाटन श्रीनिवास मल्लको पालादेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दा कति रह्यो ?
कति गयो ? के भयो ? भन्ने विषयमा मेरो कार्यपत्रले केही सार्थक बहस सतहमा ल्यायो । एक गैरनेवा मैले तथ्यसंगत ढंगले पाटनका गल्लीका बयान प्रस्तुत गर्ने मौका पाउँदा म जति आह्लादित भएँ त्यति नै आनन्दित भए हुनन् एसिया, युरोप र अमेरिकामा आआफ्ना गुँडमा बसेर जुममा झुम्मिएका नेपाली, गैरनेपाली सबै । म भने मेरोभन्दा ठीक अघिल्ला प्रस्तोताको कार्यपत्रको चास्नीमा चुर्लुम्म भएको थिएँ ।
कार्यपत्र प्रस्तोता थिए सांस्कृतिक रूपमा हाम्रा नेवारी परम्परागत मिठाइलाई क्यानाडाको बजारमा प्रचार गर्ने कोसिस गरिरहेका उद्यमी नरेश ताम्राकार । पाटन, धलायाचाका परम्परागत मिठाइ पसले संस्कृतिका बाहक हुन् नरेश । उनी अहिले रहरकै हिसाबले टोरोन्टोमा लाखामरी बनाई रहेछन्, जेरी स्वारी पकाइरहेछन् र त्यो स्वाद चिन्नेको दैलो दैलो पुर्‍याइरहेछन् । काठमाडौंमा जन्मेहुर्केको हाम्रो जोडीले एकबाजी उनको हातको जेरी स्वारी चाख्यौँ ।
आफ्नो किशोरावस्था क्यानाडामा बिताएको हाम्रो छोराले स्वारीले लपेटिएको जेरीको पहिलो ' बाइट' सँग भन्यो - यसमा त पाटनको स्वाद छ ।
हाम्रो परिवारलाई नरेशको उद्यमशीलता मन पर्‍यो । उनको यस उद्यमलाई टेवा दिने विचार गरेकाछौँ । किनभने नरेशको यो उद्यमशीलता नेपालमा रहेको समाजले हेपेर भनेजस्तो ‘भाँडा माझ्न गएको’ श्रमशक्तिको परिचायक होइन ।
सन् २०११ तिरकै अर्को घटना सम्झिन्छु । भर्खर क्यानाडा आएका थियौँ । एडमन्टनमा बसाइ थियो । उतिखेर म नयाँ आउने आप्रवासीलाई ‘करियर काउन्सिलिङ’को काम गर्थेँ । नारायणगढतिरबाट ध्रुव श्रेष्ठ, मिनु श्रेष्ठ नामक नयाँ नेपाली जोडी आएका थिए ।
तीमध्ये महिलाको ब्युटी पार्लरवाला सीप रहेछ । कपाल काट्ने पेसामा नेपालीको हात चलिसकेको थिएन । मलाई सम्झना छ - उनीहरूको घर नै पुगेका छौँ हामी कपाल काट्न । त्यसभन्दा अघि एकाध पटक घरमै इमानदार प्रयास गरियो, राम्रो भएन । हामी त्यसैले कि सैलुन जान बाध्य थियौँ कि त एक चिनियाँ महिलाकोमा ।
नेपालीकोमा जाँदा एक आफ्नो भनाइमुताबिक सस्तोमा कपाल काट्न पाइन्थ्यो भने अर्को भर्खर आएर व्यवस्थित हुनलागेको स्वदेशी जोडीलाई पेसागत मद्दत पनि पुग्थ्यो ।
कपाल त काटिन्थ्यो नै पैसा पनि आफ्नै नेपालीको हातमा पर्थ्यो । अहिले अहिले पनि मिनु त्यो काम गर्छिन् रे ! यी जोडीसमेत क्यानाडामा नेपाली सामाजिक भाष्यअनुरुपको ‘भाँडा माझिरहेका’ छैनन् । उद्यम नै गरिरहेका छन् ।
एडमन्टनपछि सन् २०१२ को सुरुका महिनामा नै क्यालगेरी सरियो कामको सिलसिलामा । करिब अढाइ वर्षको बसाइ रह्यो त्यहाँ । अपेक्षाकृत ठूलो सहर, विभिन्न पेसाजीवी नेपाली त्यहाँ थिए । तीमध्ये दुई जनाको उद्यमशीलताको चर्चा गर्दैछु । एक थिइन् - डाक्टर रेखा पराजुली ।
उनी त्यतिखेर भर्खर डेन्टल क्लिनिकमा प्राक्टिस गर्न सुरु गर्दै थिइन् । उनीहरूको जोडीको पेसागत जीवन पुनर्प्राप्तिको कथा प्रेरक र मार्मिक छ । त्यो अन्य कुनै अवस्थामा लेखौंला तर रेखा पराजुलीले जे गरेर देखाइन् त्यसले क्यालगेरीको तत्कालीन समाजमा एउटा सकारात्मक तरंग पैदा गर्‍याे । रेखा र राजीव दुवै नेपाली समाजले भने झैँ ‘विदेशमा भाँडा माझ्न’ आएनन् आफ्नो उद्यम चलाइरहेछन् ।
त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुन् - क्यालगेरीका अर्जुन गैरे । अर्जुन जति नम्र, भद्र र सुशील मान्छे बिरलै भेटेको छु मैले । उनी एक कुशल व्यवस्थापक हुन् र हालको क्यालगेरीको नेपाली रेस्टुराँ साम्राज्यको भुल्न नसकिने व्यक्ति हुन् । हेर्दाहेर्दै उनको नेतृत्वका घटीमा ५ वटा नेपाली/ इन्डियन रेस्टुराँ संचालनमा छन् अहिले क्यल्गेरिमा । निश्चय नै अर्जुन त परिआए जुठो भाँडा पनि माझ्दा हुन् तर उनी त्यो र त्यसो गर्न क्यानाडा आएका थिएनन् ।
पेट पाल्न उनलाई त्यो गर्ने वाध्यता पनि छैन । क्यालगेरीमा रहुन्जेल हाम्रो पारिवारिक दन्त चिकित्सक रेखा थिइन् भने अर्जुन जी त पारिवारिक मित्र । एकपटक त्यस अल्प अवधिमै पनि करिब ५०० सदस्य रहेको ‘नेपलिज कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्यालगेरी’ को प्रेसिडेन्टको अभिभारा आइपरेको थियो मेरो काँधमा ।
अर्जुन जीको रेफरलमा नेपाली सेफ देवी कँडेलको नेतृत्वमा झन्डै ५०० जनाको दसैं जमघट सफलतापूर्वक उतारिएको थियो । सस्तो, आफ्नो स्वादको र आफ्नै समुदायको नेतृत्वमा उक्त क्याटरिङको तारिफपछिसम्म क्यालगेरीमागुन्जिरह्यो ।
सन् २०१४ मा कामकै कारण फेरी बसाइँ सरियो रिजाइनामा । अपेक्षाकृत सानो, दुर्गम र कम नेपाली भएको सहर हो रिजाइना । प्रान्तीय राजधानी भएका कारण उद्यमीभन्दा जागिरे धेरै थिए त्यहाँ । तथापि पहिलो भेटमा नै अर्जुन लामीछानेसँग तन्तु गाँसियो ।
ठट्टा गर्ने मेरो बानी उनलाई कस्तो लाग्यो उनै जानुन् तर मैले जिस्केर नेपालमा पढाएको त अंग्रेजी होला, यहाँ इङ्ग्लिस पढाउन अलिक समय लाग्ला, बरु मिलन र तिमी मिलेर ‘अर्ली चाइल्हुड एजुकेसन सेन्टर’ ( दिवा शिशु स्याहार केन्द्र) खोल्दा पो सहज हुन्छ कि ? भनेको थिएँ ।
मेरो भनाइ मात्रैले त के हुँदो हो तथापि केहि समयपछि घर किने र भुइँतलामा सेन्टर चलाए । अझै त्यो उद्यमबाट विमुख भएका छैनन् होला । अर्जुन भने अब इङ्ग्लिस टिचर पनि भएछन् र विश्वविद्यालयतिर पनि पढाउन थालेछन् । अर्जुन पनि नेपाली समाजले भनेझैँ क्यानाडामा विदेशीको जुठो भाँडा माझेर बसेको छैनन् । रिजाइनामा नै एक नेपाली मारवाडी भाइ पनि छन् - अनुप घिराइया ।
अनुप आफू त उद्यमी भए नै अरूलाई रोजगारी पनि दिइरहेछन् । एउटा पसल चलाउछन् –‘स्पाइस बजार' नाममा । रिजाइनामै केही संगतभित्रकै भाइहरुले जाँगर गरेर थोरबहुत लगानीमा ‘लुम्बिनी इन्टरटेन्मेन्ट’ भन्ने कम्पनी दर्ता गरे र केही नेपाली चलचित्र ल्याएर देखाए पनि ।
अर्जुन अधिकारी, सुमन भण्डारी, विनोद हुमागाईं, उद्धव ठगुन्ना, पिताम्बर भण्डारी आदि उनीहरू आफ्नो पेशागत दक्षता अनुरुपको काम त गर्छन् नै उद्यमशीलतामा पनि पछि परेका छैनन् । करिब अढाइ वर्ष भयो रिजाइना छोडेको पनि । अलिअघि अवकास लिएकी मेरी एक जना सहकर्मी भन्दै थिइन् - रिजाइनामा खुलेको नयाँ नेपाली रेस्टुराँमा तिम्रो घरमा खाएको जस्तो स्वादको मम खाएँ मैले ।
नयाँ रेस्टुराँवालासँग त मेरो प्रत्यक्ष चिनजान हुन पाएन तथापि के भन्न सक्छु भने उनी कसैको जुठो भाँडा माझेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छैनन् बरु राज्यलाई कर तिरिरहेछन् र रोजगारी सिर्जना गरिरहेछन् ।
सन् २०१८ मा फेरी बसाइ सरियो टोरोन्टोतिर । टोरोन्टो आफैँमा एउटा सिङ्गै क्यानाडाजस्तो छ । टोरोन्टोवासीहरु अलिकति अभिमानले, अलिकति अल्पज्ञानले ‘ग्रेटर टोरोन्टो एरिया’ लाई नै क्यानाडा भन्ठान्छन् ।
यहाँ मैले नेपाली समुदायको मात्र कुरो गरिन । यहाँका रैथाने वा दुईतीन पुस्ता टोरोन्टोमै बसिसकेका आप्रवासीमा समेत त्यो समस्या छ । अधिकांश नेपालीलाई त टोरोन्टोदेखि रिजाइनाको दूरीभन्दा काठमाडौँबाट ढाकाको दूरी छोटो छ भन्ने पनि थाहा नहोला । त्यसैले टोरोन्टोमा ज्ञात अज्ञात हजारौं उद्यमी छन् नेपाली मूलका । तीमध्ये केहीको चर्चा गर्दा अन्यलाई अन्याय नहोइदेओस् भन्नेमा म सजग रहनेछु ।
भर्खरमात्र टोरोन्टो आएका कारण सम्पर्क पातलो नै थियो । बाक्लिने क्रम त अझै पनि जारी नै छ । टोरोन्टोको सुरुका दिनमा बुवाआमा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो । अचानक एक दिन बिहान बुवाको दाँत दुख्यो ।
बुवा आमाको क्यानाडाको आगन्तुक बसाइ । त्यसमाथि हेल्थ इन्सुरेन्सले कभर नगर्ने दन्त सेवा र त्यसभन्दा जटिल त दुखाइ अर्थ्याउने समस्या । बुवालाई सामान्य अंग्रेजी समस्याको विषय होइन तर पनि पीडालाई व्यक्त गर्ने शब्दावली त मातृभाषामा बाहेक अन्यमा त पाउन पनि अप्ठेरो हुन्छ नै ? उदाहरणार्थ, दाँत दुखेर कानमा समेत चड्का हानिरहेकोछलाई के भन्ने इङ्लिसमा ? अथवा, जेनेरल फिजिसियनकोमा गएर कोखा हान्यो भन्न अंग्रेजीमा के गरी भन्ने ? यो असहजताबीच कुनै समय धरानमा सँगै काम गरेका प्रिय अनुज अशोक यादव र उनकी दन्तचिकित्सक अनिता गुप्ता स्मृतिमा आए । फोन लगाएँ ।
बुवालाई लगेँ । डा. अनिता गुप्ताले बुवाको दाँतको समस्या समाधान गरिदिइन् त्यो पनि निःशुल्क । शुल्क लिन कागजी झ्याउलो पनि थियो । अहिलेसम्म बुवाले अनितालाई सम्झिनु हुन्छ । अनिताले आफूलगायत अन्य ३ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएकी छिन् ।
अनिता पनि हाम्रो शास्त्रीय परिभाषानुरूपको भाँडा मझाइमा छैनन् । पेसाजन्य उद्यम नै गरिरहेकी छिन् । भागम्भागको जीवनमा उनैले फोन गर्छिन् र भन्छिन्- सर, म्यामको वार्षिक चेकपको समय भयो है ? कहिले आउने हो, निधो गरौँ । हो, यो उनको पेसा हो, त्यसबापत उनले दानापानी कमाउँछिन । जे होस्, पेसागत मान्यता, दक्षता र क्षमताका कारणमात्र नभई भाषिक सहजताका कारण पनि हामी अनिता गुप्ताका सेवाग्राही बनेका छौँ । एकप्रकारको सन्तुष्टि छ - कसैको सेवा लिनैपर्थ्यो, नेपालीकै सेवा लिने सुअवसर पाएका छौँ ।
मैले उल्लेख नगरे अन्याय हुने अर्का पात्र हुन् - पूर्वी टोरोन्टोका अटोमेकानिक राजकुमार गुरुङ । राजकुमार जीलाई भेटेपछि पूरै मेरो पैतृक थलो गण्डकीको मगमग बासना आउँछ । राजकुमार आफैँले गाडी मर्मतको एउटा ग्यारेज चलाएका छन् । गाडीको नियमित जाँच र मर्मत गर्छन् ।
हरेक वसन्त र पतझर मौसम सुरु भएपछि उनैले सम्झेर फोन गर्छन् र भन्छन् - गाडीको टायर चेन्ज गर्ने बेला भो, कहिले आउनुहुन्छ ? क्यानडामा यी दुइ सिजनमा मौसम अनुरुपको ट्युनिक भने झैँ माैसमअनुरुपको टायर हाल्नु पर्छ । नत्र हिउँदमा गाडी चिप्लेर दुर्घटना हुनसक्छ ।
मैले जानेसम्म कुनै कुनै प्रान्तमा त विन्टर टायर कानुनत: अनिवार्य नै छ । सवारी साधनमा सो जडित छैन भने भारी जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
गुरुङ आफ्ना बलिया हातले जुन सत्कर्म गर्छन् र कमलो हाँसोले काम फत्ते भएको जानकारी दिन्छन्, एकबाजी त्यो सेवा रसास्वादन गरेको नेपाली मान्छे दोहोर्‍याएर त्यतै नजाला भन्ने मलाई लाग्दैन । जान्छ, फर्कीफर्की जान्छ । सेवाको शुल्क त जसलाई पनि तिर्नै छ, किन नेपाली उद्यमीलाई नतिर्ने ? राजकुमार जी पनि भाँडा मोल्दैनन्, उद्यम गर्छन्, कर तिर्छन् र रोजगारी दिएका छन् ।
घर खरिदविक्री प्रयोजनमा आवश्यक एजेन्ट पेसामा टोरोन्टो क्षेत्रकै बाघ बूढा हुन् मदन केसी । पोखराका यी पहिलो पुस्ताका आप्रवासी नेपालीले प्रत्यक्षत: सयको हाराहारी रोजगारी दिएका छन् होला भने परोक्ष हजारौंलाई प्रेरणा दिएका छन् । यी भद्र छन्, नम्र छन् । धर्तीसँग नजिक छन् ।
' मैले त केही जानेको छैन' भनीभनी यी बूढाले आफूलाई ठूलो रोजगारदाता बनाइसके । पछिल्लो समय नेपाली स्वादको इन्डियन रेस्टुराँमा समेत जमेका छन् रे भन्ने सुनिन्छ ।
मदन केसी पनि त्यस्ता पात्र हुन् जो विदेशीको जुठोभाँडा माझेर बसेका छैनन् बरु अचेल त विदेशीलाई जागिर दिने भएका छन् । ‘एभरेस्ट रियल्टी लिमिटेड ब्रोकरेज’ उनको पहिचान बनेको छ र समग्रमा टोरोन्टो क्षेत्रका नेपालीको लागि गौरवको नाम ।
कोपुन्डोलबाट आँबुखैरेनी गए झैँ छ मेरो जागिर खान जाने ठाउँ अचेल टोरोन्टो एरियामा । दिनको एकतर्फी ११७ किलाेमीटर ड्राइभ गरेर काममा पुग्छु । बिल्कुल नयाँ सहर हो त्यो मेरो लागि । गएको साता सहकर्मीले सोधे - यस सहरमा नेपाली खाना पाइन्छ ? प्रश्नले पहिले त हक्क न बक्क भएँ ।
पछि सोचेँ - गुगललाई ' हक्का 'भनेर सोधेँ भने त पक्का थाहा हुन्छ । साँच्चै नै, एभरेस्ट नाम गरेका दुईवटा रेस्टुराँ रहेछन् त्यहाँ । मेनु हेर्दा जुनमा मम देखेँ, त्यसैमा फोन गरेँ र पहिलो प्रश्न सोधेँ - नेपालीमा अर्डर गर्न पाइन्छ? यो यस अर्थमा जरुरी थियो कि गोरालाई पिरो पनि स्पाइसी हुन्छ मसालेदार पनि स्पाइसी ।
उताबाट फोन उठाउने भाइले भने - भन्नुस् न सर, हामी त नेपाली नै हौँ । मैले अर्डर अर्थ्याएँ । मसलेदार त होस् पिरो भने नहोस् है ? सर, अलिअलि पिरो त सबै हुन्छ, हजुरलाई माइल्ड वाला गर्दिऊँ ? तोकिएको समयमा एभरेस्ट हक्कामा पुगेपछि उही हाम्रो स्निग्ध, निश्छल र कर्तव्यपरायण हाँसोले नमस्कार गर्‍याे र भन्यो - हजुरको अर्डर रेडी छ ।
मैले मनमनै सोचेँ- यी उद्यमीले पनि निश्चय नै सांकेतिक भाँडा मझाइ गरिरहेका छैनन् । उद्यम गरिरहेका छन्, राज्यलाई कर र समाजलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । मेरा सहकर्मीले तिनका मम मन पराए ।
धर्म केसी पनि साथीहरुसँग मिलेर ममको व्यवसायमा जुटेका छन् । उनीहरू खसीको, कुखुराको र सब्जीको मम बटार्छन्, फ्रोजन गर्छन र अर्डरअनुसार घर दैलोमा पुर्‍याइदिन्छन् । हामीले उनीहरुको उद्यमलाई टेवा दिन अर्डर दियौँ ।
पूर्ण कँडेल जीको अगुवाइको ‘लिअम इन्टरनेसनल’सँग मिलेर दाल, ताइचिनको च्युरा, वाइवाइ चाउचाउसमेत ल्याइदिने रहेछन् । नेपाली स्वादको पारखी भएकाले होला, दाल र च्युरा थियो, वाइवाइ भने मगाइयो ।
मम मीठो भयो, अचार गजबको थियो । बाहिर माइनस २८ डिग्री सेन्टिग्रेडको चिसोमा करिब ४० किमि पर नमस्ते ममका धर्मले जुन सेवा दिए त्यो विदेशमा भाँडा माझ्नु थिएन । एउटा उद्यम थियो ।
अलिअघि कानुनी परामर्श चाहिएको थियो र हाजिर थिए एक बित्ता पारी रमेश कार्की । उनी टोरोन्टोमा बसेर कानुन व्यवसायीको काम गरिरहेका छन् । पेसाले वकिल कार्की नारायण गोपालको गीत मीठो गाउँछन् । मेरो समस्याको समाधान आफैँले त गर्न सकेनन् ।
किनभने उनी कर्पोरेट ल हेर्दा रहेछन् मलाई चाहिएको थियो लेवर ल । तथापि, बडो सहज र आत्मीय पाराले भने- सर, हजुरको केस बलियो छ, म हजुरलाई केहि लेबर ल जानेका मेरा सहकर्मीहरुसँग चिनजान गराउँछु ।
कसले भन्छ त्यति सजिलै यहाँ नेपाली नहुने हो भने रमेश जीले दिएको परामर्शको समय केही नभए पनि दुई घन्टा हुँदो हो ? त्यो सेवा मैले निःशुल्क पाएको छु ।
अन्यथा, मेरो कागजात पढेर पत्राचार गर्न त पछि घन्टाको पाँच सय डलर तिरेको छु मैले वकिललाई । रमेश कार्की अफिस खोलेर बसेका छन्, रोजगारी दिएका छन्, राज्यलाई कर तिरेका छन् । समग्रमा भन्दा, उनी पनि भाँडा माझेर विदेशमा बसेका छैनन् ।
भ्यालेन्टाइन डेको बिहानै ' दाजु भाउजुलाई प्रणय दिवसको शुभकामना' भन्दै फोनै गरे पंजीकृत खजाञ्ची ( चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) शरद पौडेलले । उनी हाम्रा एकाउन्टेन्ट हुन् । सालाना हामीले गरेको आम्दानीका आधारमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर वा राज्यले हामीलाई फिर्ता दिनुपर्ने करकट्टाको रकमको हरहिसाब उनैले गरिदिन्छन् । यो हिसाबकिताब गर्ने एउटा विधि, पद्धति छ । आफैँ पनि गर्न सकिन्छ भन्छन् जान्नेहरु ।
हाम्रो त झन् न लगानी, न बेपार, जागिरको रकम र एकाध चन्दा रसिद, सहज हुनुपर्ने हो नि ? तैपनि ३ वर्षसम्म आफैँले करसम्बन्धी हिसाब गरेर सरकारलाई बुझाउँदा नमिलेर चेत बाबा कासी भएका हामीलाई शरद भाइले सजिलो पारिदिएका छन् ।
एउटा आत्मीयता छ, भाषिक सहजता छ, घन्टौं पारिवारिक वातावरणमा कुरा गर्न पाइन्छ । दाजु भाउजुलाई यसो गर्दा फाइदा छ, नियमले यसो यसो गर्न भनेको छ भनेर उनैले भनिदिन्छन् । कहाँ देख्छ नेपाली समाजले यो सब ? उसले त शरद पौडेल पनि भाँडा माझ्न विदेशप लायन भएकोमात्र देख्दो हो ।
माथि उल्लेखित पात्र कुनै पनि काल्पनिक होइनन् र यीमात्र पनि क्यानाडामा भएका उद्यमी पनि होइनन् । यी मैले सेवा लिएका मेरो भाषा बोल्ने मेरा सङ्गतीमात्र हुन् र यी प्रतिनिधि पात्र हुन् । यीजस्ता अहिले त हजारौंमा पुगे होलान् पूर्व ह्यालिफ्याक्सदेखि पश्चिम भिक्टोरियासम्म ।
यी सुरुमा क्यानाडा आउँदा भाँडा माझ्ने कर्ममा लागे पनि हुनन् मैलेजस्तै । मलाइजस्तै यिनलाई कसैले लघारेको पनि थिएन, कसैले घिच्याएको पनि होइन ।
यी आए, आफ्नो पेसागत भुइँ खोस्रे, मीठो फल फलाए । यिनका सेवा लिन पाउँदा म आफू त पुलकित छु भने यी आफैं कति खुसी होलान् ? क्यानाडाको चार सहरमा बसेको र तिनै सहरको सामुदायिक नेतृत्वमा बसेको आधारमा लेख्दैछु - विदेशीको जुठो भाँडा माझेरभन्दा आफ्नो कर्म गरेर स्वतन्त्र र स्वाभिमानी जीवन बाँची रहेका छन् नेपाली क्यानाडामा ।
यति सबै लेखेपछि यो लेखिन भने आफैंलाई कुटुकुटु खानेछ । कोरोनाले जर्जर भएको अर्थतन्त्रमा समेत नेपाली रेस्टुराँमार्फत हाम्रै स्वाद पस्कने जमर्को गरे सुमेश राजकर्णिकार र साथीहरूले र यस वर्षको क्रिसमसइभ पार्टीमा । झन्डै ४० मिनेट परको त्यहीँको खाना ल्याएर खाइयो ।
सरकारले स्थानीय ब्यापारीलाई सहयोग गरिदेउ त भनेको हो, हामी केही नेपाली परिवारलाई सुमेश जीको टिमलाई सहयोग गर्न मन लाग्यो र त्यसो पो गरियो ।
तर यो पनि नभुलौँ, क्यानाडामा पनि नेपालमा जस्तै नेपाली राजनीतिक संघ संगठन छन्, चुनाव गर्छन् ।लड्छन् , भिड्छन् ।
सामाजिक संजालमा आएर तथानाम भन्छन् । जातजातका, हातहातमा सरकारी चन्दा उठाएर खाने संस्था पनि छन् । तिनले एक त माथि लेखमा देखिएका प्रतिनिधि पात्रलाई देख्दै नदेख्लान्, देखे पनि नदेखेझैँ गर्लान् ।
नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि राजदूतावासले समेत यी यस्ता माटो मिसिएका मोति भेटेको नहुँदो हो । र यी प्रतिनिधि पात्रलाई भने देखिने वा लेखिने चाहले भन्दा आफ्नो लगनमा विश्वास होला । यिनलाई त ‘जुठो भाँडा माझ्न विदेश पलायन भएको’ भन्ने कटाक्ष सुन्ने फुर्सदसमेत नहोला ।
यो मेरो लेख नितान्त निजी अनुभूति हो र किञ्चित पनि आत्मश्लाघा होइन । न त कुनै एक व्यापारिक प्रयोजनले लेखिएको विज्ञापनै हाे । लेखमा परेका प्रसङ्गहरु प्रतिनिधि पात्रको सार्वजनिक जीवनको प्रत्यञ्चामात्र हो ।
उनीहरुको अर्को कुनै सेवाग्राहीसँगको निजी सम्बन्ध र अनुभव मेरोभन्दा पृथक हुनसक्छ । खुसी लाग्छ - हामी वास्तवमा यस्तो नेपाली भनेर यता चिनिदै छौँ । नेपालबाट पनि त्यसरी नै चिनिने दिन आउनेछ भन्ने विश्वास त लिन पाइयो नि ! कि कसो ?
शुक्रबार, फागुन ७, २०७७ मा प्रकाशित
#डा. पुण्यसागर मरहट्टा
समयमा दलकाे अधिवेशन नगर्दा लोकतन्त्रको पहरेदार ठानिएको देशकै पुरानो र ठूलाे पार्टी नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको... २१ घण्टा पहिले